साम्देन छोलिङ गुम्बाको ऐतिहासिक महत्व र इतिहास « Kalakhabar
साम्देन छोलिङ गुम्बाको ऐतिहासिक महत्व र इतिहास
प्रकाशित मिति : मंगलवार, १९ कार्तिक २०७६ १५:२१
कलाखबर संवाददाता,१९,कात्तिक–सोलुखुम्बु । प्राकृतिक सुन्दरता र धार्मिक कला सँस्कृतिले भरिपूर्ण भएको सोलुखुम्बु जिल्ला एक रमणीय जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । जहा भिविन्न जातजाति भाषाभाषी र धर्म कला सँस्कृतिका आस्थाबादीहरुको बसोसास रहेको पाइन्छ । जसमध्य छुट्टै इतिहास र पहिचान बोकेको शेर्पा जाति पनि एक हो । यी जातिहरुको आफ्नो छुट्टै धार्मिक इतिहास कलासँस्कृति र पहिचान झल्केको पाइन्छ । परापूर्वकालदेखि नै अंगाल्दै आएको बौद्ध धर्म यो जातिको मुख्य आस्थाको धरोहर मानिन्छ ।
गुम्बा नै गुम्बाले सजिएको सोलुखुम्बु जिल्लाको विभिन्न स्थलहरु मध्ये सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा न ६ खोरियाभित्र अवस्थित साम्देन छोलिङ गुम्बा पनि एक हो । यो गुम्बाको आफ्नो पुराने इतिहास र पहिचान रहेको पाइन्छ । सुन्दर पहिचान र सभ्यता झिल्किने यो गुम्बाको स्थापना वि. स. १९८७ सालमा भएको हो । पहिलो चोटी स्थानीय टुक्ति गोर्जा शेर्पाको पूर्खाहरुले आफ्ना निजी परिवारको प्रयोजनका लागि यो गुम्बाको स्थापना गरेको क्यिूदन्ती पाइन्छ ।
लामो समय सम्म टुक्ति गोर्जाको सन्तति कामी गोर्जा शेर्पाको स्वामित्वमा यो गुम्बोको रेखदेख र संरक्षण गरिएको थियो । परिवर्तशील समयले फन्को मार्दै गर्दा केही समयपछि सञ्चालक कामी गोर्जाको देहावसान भएको र अरु सन्ततिहरु पनि विदेश पलायन भएपछि यो गुम्बा विस्तारै जिर्ण र अब्यस्थित बन्दै गयो । त्यसपछि यो गुम्बालाई विस्तारै आत्मसात गरि स्थानीय स्तरबाटै रातो गुम्बाको नामबाट निरन्तर रुपमा सञ्चालन तथा संरक्षण पनि गरिएको थियो ।
केही समयपछि कामी गोर्जा शेर्पाको पनि देहावसान भए पछि निजको छोरा छोवाङ गोर्जा शेर्पाको साहमतिमा वि. स. २०५४ सालमा सामुदायिक गुम्बाको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । केही समयपछि विधिवत रुममा यो गुम्बालाई सरकारी निकायमा समेत दर्ता गर्ने निर्णय गरियो । एकातर्फ सामुदायिक गुम्बाको रुपमा विकसित हुदै जानु र अर्कोतर्फ धार्मिक आस्था बोकेको यो गुम्बा जिर्ण अवस्थामा जानु सबैको लागि मुख्य चुनौतीको विषय बन्यो ।
जीर्ण अवस्थामा रहेको यो गुम्बाको संरणक्षण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सबैको काधँमा आईप¥यो । यो आपतकालिन अवस्थामा नेपाने युवा कलब केन्द्रिय कार्य समितिको पहलमा गुम्बाको पूर्ण निर्माण कार्यलाई अगाडी बढायोे । नेपाने युवा क्लवको महत्वपूर्ण भुभिकाले गाँउमा निकै विकासका लहर छाएको गुम्बाका सदस्य नुरु शेर्पाले कलाखबरलाई जानकारी दिए । यसरी गुम्बाको पूर्ण निर्माण कार्यमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सहयोगी मन,दाताहरुको सहयोग अत्यन्तै स्मरणीय रहेको पनि उहाँले बताए ।
वि.स. २०६३ सालबाट पून निर्माण कार्यको थालनी गरि २०६५ साल सम्मको अन्त्यमा आईपुग्दा हालको साम्देन छोलिङ गुम्बाले पूर्ण रुपमा आफ्नो नयाँ स्वरुप फेरेकोे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष फुरी शेर्पाले बताउनु भयो । त्यसको एक वर्ष पछि आध्यात्मिक धर्म गुरु परमपूजनीय क्याब्जे ताक्लुङ छेटुल रिम्पोर्छे ज्यूको कोमल बाहुलीबाट वि. स. २०६६ साल फागुण महिनाको १७ गते सो गुम्बाको सम उदघाटन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिए ।
हाल यो गुम्बाको सञ्चालक समिति अन्तर्गत फुरि शेर्पा अध्यक्ष, ,नुरु शेर्पा सदस्य र आङबाबु शेर्पा मुख्य व्यावस्थापन संयोजकको रुपमा रहेका छन् । यो गुम्बामा प्रमुख लामाको रुपमा ङावाङ छेलेक खेम्बु र ल्हाक्पा लामा रहेका छन् । यो गुम्बामा बोद्ध धर्मावलम्बीहरुको विभिन्न संस्कार अनुसार विभिन्न पूजाहरु गर्ने गरिन्छ । जस मध्यको न्यूने पूजा पनि एक हो । यो पूजा हरेक बर्षको एक पटक जेष्ठ महिनामा गर्ने गरिन्छ । किनकी यो महिनामा शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्म महिनासँगै बुद्धले ज्ञान हाशिल गरेको समय मानिन्छ ।
रमणीय सोलुखुम्बुको काख खोरियामा अवस्थित यो साम्देन छोलिङ गुम्बा प्राचिन इतिहास र छुट्टै पहिचान बोकेको एक सुन्दर गुम्बा हो । यो गुम्बामा हरेक बर्षको जेष्ठ महिनामा न्यूङङे पूजा गरिन्छ । बुद्धिस्टहरुको धर्म अनुसार यहा जम्मा चार दिन पूजा गरिन्छ । पहिलो दिन साङ गरिन्छ, जसको नेपाली अर्थ पूजाको थालनी अर्थात सुरुआती चरण भन्ने बुझिन्छ । त्यस पछि दोस्रो दिन स्याफ्रबु नृत्य गरिन्छ र तेस्रो दिन ब्रत बसिन्छ । त्यो समयमा लामाहरु मौन बसि आँखा चिम्लिएर तपस्या गर्दछन् ।
बिहानीको मिर्मिरे समयमा लामाहरुसँगै अरु पनि ध्यानमा बस्ने चलन छ । यो समयमा लामाहरु र साधनामा बसेका तपस्विहरुलाई बोल्नु र केही खानु पनि हुदैन भन्ने चलन छ । यो सँगै बिहानै दियोमा बत्ति पनि बाल्ने गरिन्छ । जसको अर्थ हुन्छ देशमा अशान्ति नहोस्,हत्या र हिंसा नहोस्,आपतविपत आइ नपरोस्, बिरामी नहोस््, भन्ने जस्ता कुराहरुको कामना गरिन्छ । पूजाको चौथो दिन अर्थात अन्तिम दिन सबै गाउँलेहरु समेत बोलाएर खाना र प्रसाद खाने चलनसँगै यो पूजाको समापन पनि गरिन्छ ।